Alahady Karemy faha 4B (Jn 3,14-21) 11/03/2018 | FKMP
Alahady Karemy faha 4B (Jn 3,14-21) 11/03/2018
RAHA MBA FANTATRAO MANKO NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANAO
Mety efa hitantsika ny manjo ny olona latsaka ao anaty honahona, arakaraka ny hihetsiketsehan’ilay olona latsaka ao no vao maika mampilentika azy. Mila tanan’olona hafa ety ivelany manavotra izay vao mety ho avotra ilay olona latsaka ao. Toy izany koa isika eo amin’ny fiainana, tsy afaka ny hanavotra ny tena irery fa Andriamanitra no manome ny tanany ho antsika mba hanavotra antsika satria TIA ny hahavonjy sy hahasambatra antsika Izy. Hoy Jesoa hoe tsy ny finaritra no mila Dokotera fa ny marary. Endrika asehon’ny Tenin’Andriamanitra fa Andriamanitra dia toy ny mpitsabo ary isika olombelona dia mila ny fitsaboany, mila ny famonjeny.
Raha dinihantsika tokoa ny zava-misy ankehitriny toa miha ratsy, miha saroratra, miha simba izao fiainana izao: ady, fitiavan-tena mihoampampana, asa fampihorohoroana, korontana, zava-mahadomelina, tsy fanajana ny ain’olombelona sy ny tontolo iainana, tsy fandriam-pahalemena, kolikoly, fanambakana sns… Mampalahelo ny zava-misy ka toa mamoy fo ny olona maro, tsy mahita ny tena hatao hoe dikan’ny fiainana intsony, very hevitra e! Fa manoloana izany dia ho antsika Kristianina misy ny tsirim-panantenana ary indrindra misy zavatra iray lehibe saro-bidy mahasambatra, mitondra hafaliana sy famonjena. Tsy inona izany fa ny FITIAVAN’ANDRIMANITRA antsika tsirairay avy.
Hoy ny Vaovao Mahafaly androany Alahady fa 4 Karemy B hoe: “Endrey izany Fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany tokana mba tsy ho very izay mino Azy” (Jn 3, 14-15). Ny Fitiavan’Andriamanitra no manome hafanana antsika amin’izao andro mangatsika sy tsy ampy fitiavana izao. Koa efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny nanomezan’Andriamanitra antsika an’i Jesoa sy ny Fanahy Masina ny Fitiavana. Izany no mahatonga antsika hiala ny haizina makany amin’ny Hazavana, hiala ny fahotana makany amin’ny fahasoavana, hiala amin’ny fankahalana makany amin’ny fitiavana, hiala amin’ny fisalasalana mankany amin’ny Finoana, hiala amin’ny fahakiviana makany amin’ny fanantenana, hiala amin’ny fahafatesana makany amin’ny Fiainana.
Ny maha kristianina antsika dia tsy hoe satria tia an’Andriamanitra isika fa hoe tian’Andriamanitra isika.
Previous Post: Sabotsy 3 Karemy B (Lk 18,9-14) 10/03/2018
Next Post: Alarobia 4 Karemy B (Jn 5,17-30) 14/03/2018